Semih oo Galatasaray u ciyaaraya 2012kii
(1991-02-24) 24 Febraayo 1991 ( 29jir)
Team Apps† (Goolal)†
Galatasaray 119 (3)
Turkiga 15-Jirka ah 2 (0)
Turkiga 16-Jirka ah 9 (0)
Turkiga 17-Jirka ah 25 (1)
Turkiga 18-Jirka ah 10 (0)
Turkiga 19-Jirka ah 2 (0)
Turkiga 21-Jirka ah 4 (0)
Turkiga 23 (0)
* Cayaaraha naadiyaasha waaweyn iyo goolasha waxaa la xisaabayaa horyaalka gudaha oo kaliya oo sida saxda ah 2 April 2016.
‡ National team caps and goals correct as of 15 July 2015
Semih Kaya (Bergama, 24 Febaraayo 1991) waa cayaaryahan u dhashay wadanka Turkiga, wuxuuna hadda u ciyaaraa kooxda Galatasaray ee ka dhisan magaalada Istanbul iyo xulka qaranka dalka Turkiga. Semih wuxuu hore ugusoo dheelay kooxaha Gaziantepspor iyo Kartalspor ee kawada dhisan isla dalkaasi Turkiga.
Kaya ayaa ku biiray Akadeemiyada dhalinyarada Galatasaray ee ka soo jeeda dhalinyarada Altay isagoo 15 jir ah.
25kii Febraayo 2007, markii uu la ciyaarayay ciyaartoy da 'yar oo dhalinyaro ah xilli ciyaareedkii Super League Ligi (Super Youth League) oo ay la ciyaareen Beşiktaş, daqiiqadii shanaad ee ciyaarta, laad xor ah oo ka yimid Batuhan Karadeniz ayaa madaxiisa isku tuuray isaga oo ku qasbay inuu ka tago ciyaarta; kadibna wuxuu tagay isbitaal si uu u qaato qalliinka madaxa (coagulation).
Bilowgii xilli ciyaareedkii 2008-09 ayaa xiisaha dibadda u soo bandhigay Kaya kaddib markii ay soo baxeen warar sheegaya in kooxda Talyaaniga ee Internazionale ay ka warheysay ka hor inta uusan heshiis hal sano ah la gaarin,
Kulankii ugu horeeyay ee Kaya ee Kaka wuxuu ka dhacay Istanbul B.B. 19-kii Febraayo 2009.  Ka dib markii uusan helin waqti muhiim ah, wuxuu ku biiray kooxda kale ee Super League Club Gaziantepspor si amaah ah bishii Janaayo 2010 inta ka dhiman xilli ciyaareedkan, iyo  xagaagii 2010 wuxuu u saxiixay kooxda ka dhisan horyaalka Turkiga ee Cardalspor si amaah ah. 18kii Oktoobar 2010, wuxuu dhaliyey labo gool kulankii A2 ee ay la ciyaarayeen Altay.
Ku laabo Galatasaray
Markii ugu horeysay ee xilli ciyaareedkii 2011-12, Kaya looma xulin line-upka Galatasaray, lakiin dhaawacyo ay soo wajahday ciyaartoyda kale, gaar ahaan Gökhan Zan, iyo qaab ciyaareedka Servet Çetin, tababaraha Galatasaray Fatih Terim ayaa fursad siiyey si uu isu muujiyo. Ka dib markii uu soo bandhigay qaab ciyaareed adag, waxa uu dhawaan noqday xulkii ugu horeeyay ee xulkiisa la ciyaara Czech Tomáš Ujfaluši.
Kaya ayaa goolkiisii ​​ugu horeeyay u dhaliyay kooxda Samsunspor 7dii Janaayo 2012 daqiiqadii 51aad ee ciyaarta oo 2-0 ku dhamaatay, iyadoo ciyaarta ay ku dhamaatay 4-2 Galatasaray. Xilli ciyaareedkii 2011-12, wuxuu ciyaaray 30 kulan, waxaana uu ahaa xubin muhiim ah oo ka mid ah ciyaartoydii guuleystay. Waxa uu sii waday inuu noqdo daaficii ugu horeeyay ee daafaca dhexe ee kooxda iyo kooxda, isagoo soo bandhigay qaab ciyaareed deganaansho iyo kalsooni inkastoo kooxo waa weyn sida Manchester United iyo, caalami ahaan, kulankii Holland. Sanadkiisii ​​labaad wuxuu ku dhameystay 36 kulan tartamada oo dhan. 18kii Nofembar 2013, qandaraaskiisa waxaa la kordhiyay muddo saddex sano ah ilaa 2016.
Semih Kaya oo wata Billadda ciyaar wanaagga uu ku qaatay Galatasaray
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Semih_Kaya&oldid=179229"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 31 Agoosto 2018, marka ee eheed 10:39.